Global Voices teny Malagasy » Ity herinandro ity tao amin’ny bilaogy Palestiniana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Oktobra 2018 13:21 GMT 1	 · Mpanoratra Shaden Abdulrahman Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Palestina, Mediam-bahoaka
Vaovaon'ny tontolon'ny bilaogy….
Tsingerintaona nahaterahan'i Laila el-Haddad‘ izao! Nandany andro feno zavatra tsy nampoizina  niaraka tamin'ny zanany lahy Yousuf izy.
Sabbah  dia iray amin'ireo mpifaninana farany amin'ny Loka Weblog Bloggies  2005.
Promises of Arabesque Rhapsody  nanolo-kevitra ny olom-pirenen'ny JordanPlanet mba hanangana ny Book Club (Klioba famakiana boky)  azy ireo manokana.
Tonga miaraka amin'ny hevitra hafa ihany koa izy, aza mividy kiraro kadradraka! 
Inona no resahantsika…
Laila el-Haddad of Raising Yousuf  mitatitra avy any Gaza  momba ny fifidianana solombavambahoaka Palestiniana ho avy, ao anatin'ny andiana lahatsoratra  ao amin'ny Guardian Unlimited , namariparitra ny toe-java-misy tao Gaza tamin'ny herinandro lasa izay tsy dia nahazatra loatra  an'i Laila.
Tamin'ity herinandro ity, nilaza i Laila fa nameno ny tanànan'i Gaza ny afisy ary lasa maherifon'ny firenena ny rehetra raha nidina an-dalambe kosa ny sasany ary niantsoantso hoe: “Mpangalatra, mpangalatra, mpangalatra ianareo” manondro ny antokon'ny fitondrana.”  Nanome antso  ho an'ny antoko Fatah  (Arabo) mba hitady valinteny i Laila.
Telo andro lasa izay, nilaza vaovao farany i Laila fa miha-mafàna ny toe-draharaha  eo amin'ny Hamas sy Fatah. Niresaka bebe kokoa momba ny fipoahana baomba vao haingana  tao Tel Aviv izy ary ny vokatr'izany tamin'ny fifidianana. Nanombantombana izy fa tsy latsaky ny 50.000 ny mpihaino ny Hamas  raha 20.000 monja ny Gazaita any amin'ny distrika avaratra ny an'ny Fatah (Arabo)  .
Raha mandrafitra vondrona tombotsoa lehibe ho an'ireo antoko ara-politka samihafa ireo gadra Palestiniana 7000, tsy raharahiana kosa ireo mpitsoa-ponenana  izay efa ho roa ampahatelon'i Gaza, miandry ny hamahana ny olan'izy ireo efa ho 58 taona ho voavaha ary tsy afaka mifidy kosa ireo izay mihitsoka ao amin'ny toby ivelan'i Israely, tahaka ny vadin'i Laila ohatra, izay tsy afaka mifidy satria manana fahazoan-dàlana hialokaloka. Tsy mahazo alalana hiditra voalohany ao Palestina ireo Palestiniana manana fahazoan-dàlana hialokaloka .
Mikasika ny fifidianana ihany, Daoud Kuttab  nanoratra lahatsoratra  tena mampahafantatra ny zava-misy any Palestina.
Avy amin'ny umkahlil , nahangona 4 tapitrisa dolara hatramin'izao ilay milionera be tompon'ireo orinasa fanaovam-bolo sady mpanorina ny “Naman'ny Tafi-piarovana Israely” mba ho tombontsoan'ny “IDF” (tafika miaramila Isrealiana). Na izany aza, mikasa hangataka fanampiana 10 miliara dolara amin'i Etazonia  ny lehiben'ny biraon'ny praiminisitra Dov Weisglass ao Israely.
Manana zavatra holazaina amin'ny Sionista ny mpivavaka sy ny laika amin'izy ireo i umkahlil , ary mitantara ny tantaran'i Fatima, tanora tsara tarehy izay niady tamin'ny chimiotherapie nandritra ny fibodoana .
Bilaogera FADI  ao amin'ny KABOBfest  nandefa taratasy  ho an'ny gazetin'ny mpianatry Georgetown, ny Hoya ho setrin'ny fanamboamboarana sy lainga avy amin'i Bill Levinson  momba ny ISM  sy ny PSM izay fikambanana iray ihany, milaza fa ny PSM  dia miaro ny herisetra sy ny fampihorohoroana. Nanampy i FADI fa efa nanoratra i Levinson teo aloha fa “tokony handroaka ireo valala tongon-droa ireo ny Israely ary hanambatra ny faritra bodoina rehetra. Ho any amin'ny helo miaraka amin'ireo tsy vanona ireo.”
Avy amin'i KABOBfest ihany, lahatsoratra ny fanaovana ankivy ara-toekarena an'i Israely  izay mbola mitohy manerana an'i Eoropa na dia eo aza ny fanerena sy ny fandrahonana ireo mpikatroka ataon'ny fitantànan'i Etazonia sy ny mety hisian'ny fitsarana any UK tahaka ireo mpanao fihetsiketsehana ireo .
Ny zavatra kely misy dikany…
Here's Tomorrow  dia ampahany amin'ny tetikasa fanadihadiana mitohy izay mifantoka amin'ny olan'ireo mpitsoa-ponenana Palestiniana monina ao amin'ny toby fialokalofana lehibe indrindra any Jordania: Tobin'ny mpitsoa-ponenana Baqa’a . Ny fanadihadiana dia horonantsary fampahafantarana mampiseho ny fiainana, ny fanantenana sy ny fijerin'ireo izay nandositra nankany Jordania tamin'ny taona 1967 (taonan'ny Naksa ).
Abu Assad  sy Abu Sitta , lehilahy roa mijaly mafy nampiasa ny hatsarana  mba hiady amin'ny (biby) loza be.
Ny herinandro lasa teo, dia nanomboka nanome antoka  i Haitham Sabbah fa hangataka alalana amin'ny bilaogy sasantsasany mba hampiditra an'i Palestina ao anatin'ny lisitry ny firenen'izy ireo . Bilaogera roa no namaly tsara sy nanaiky izany hatramin'ny androany .
Avy amin'ny KABOBfest , misy T-shirt mahafinaritra PFLP (Mandam-bahoaka ho an'ny Fanafahana an'i Palestina)  azo jerena eto , alaivo ny anao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/29/128256/
 Nandany andro feno zavatra tsy nampoizina: http://a-mother-from-gaza.blogspot.com/2006/01/yousuf-with-mouth-full-of-cake-and-i.html
 JordanPlanet : https://mg.globalvoices.orgwww.jordanplanet.com
 Book Club (Klioba famakiana boky): http://arabesquerhabsody.com/blog/?p=71
 aza mividy kiraro kadradraka!: http://arabesquerhabsody.com/blog/?p=74
 andiana lahatsoratra: http://blogs.guardian.co.uk/news/archives/2006/01/13/the_election_dance.html
 tsy dia nahazatra loatra: http://a-mother-from-gaza.blogspot.com/2006/01/election-dance-in-guardian.html
 “Mpangalatra, mpangalatra, mpangalatra ianareo” manondro ny antokon'ny fitondrana.”: http://blogs.guardian.co.uk/news/archives/2006/01/18/fighting_talk.html
 miha-mafàna ny toe-draharaha: http://a-mother-from-gaza.blogspot.com/2006/01/countdown-to-crunch-time.html
 fipoahana baomba vao haingana: http://cyber.law.harvard.edu/globalvoices/2006/01/19/israel-tel-aviv-sandwich-shop-explosion/
 olan'izy ireo efa ho 58 taona : http://www.alnakba.org/
 mikasa hangataka fanampiana 10 miliara dolara amin'i Etazonia: http://www.haaretzdaily.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=221671&contrassID=2&subContrassID=1&sbSubContrassID=0&listSrc=Y
 ny mpivavaka sy ny laika amin'izy ireo : http://umkahlil.blogspot.com/2006/01/zionists-secular-and-others-never.html
 chimiotherapie nandritra ny fibodoana: http://umkahlil.blogspot.com/2006/01/about-lovely-lady-on-left.html
 fanamboamboarana sy lainga avy amin'i Bill Levinson: http://www.thehoya.com/viewpoint/011306/view5.cfm
 fandrahonana : http://kabobfest.blogspot.com/2006/01/rice-gets-tough-on-norwegians.html
 ireo mpanao fihetsiketsehana ireo: http://www.indymedia.org.uk/en/2004/11/301360.html
 Tobin'ny mpitsoa-ponenana Baqa’a: http://www.un.org/unrwa/refugees/jordan/baqaa.html
 hampiditra an'i Palestina ao anatin'ny lisitry ny firenen'izy ireo: http://sabbah.biz/mt/archives/2006/01/14/blog-engines-doesnt-recognize-palestine/#comment-46674
 Bilaogera roa no namaly tsara sy nanaiky izany hatramin'ny androany: http://sabbah.biz/mt/archives/2006/01/21/blogger-dot-com-considering-palestine/
 PFLP (Mandam-bahoaka ho an'ny Fanafahana an'i Palestina): http://library.nps.navy.mil/home/tgp/pflp.htm